‘एमालेसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने दल नै छैनन्’– कुँवर « Anumodan National Daily
‘एमालेसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने दल नै छैनन्’– कुँवर
प्रकाशित मिति : २९ जेष्ठ २०७४, सोमबार १६:१६
२०२५ सालमा अछामको साविक सिद्धेश्वर गाविसमा जन्मिएका कुलबहादुर कुँवर २०४७ सालदेखि नेकपा (एमाले)को राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । विद्यार्थी तथा युवा संगठन हुँदै उनी २०५० सालमा जिल्ला कमिटी सदस्य बने । हाल प्रदेश नम्बर ७ को सदस्य रहेका कुँवरलाई एमालले साँफेबगर नगरपालिकाको प्रमुख (मेयर) पदको उम्मेदवार बनाएको छ । नेकपा (एमाले) बाट यसअघि उम्मेदवार बनाइएका शिवबहादुर कुँवर (शिलोज) बारे सहकारी संस्था, स्थानीय विद्यालय र बैंकमा अनियमितता गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि उनको उम्मेदवारी फिर्ता गरी कुलबहादुरलाई अघि सारिएको छ । एमालेका तर्फबाट साँफेबगर गरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार कुँवरसंग अनुमोदनका लागि सहकर्मी तपेन्द्र कुँवरले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
साँफेबगर नपा प्रमुख पदका उम्मेदवार
†चुनावको मुखमा एमालेले साँफेबगरमा उम्मेदवार परिवर्तन गरेको छ । यसले चुनावमा फरक पर्दैन ?
– एमालेका तर्फबाट यसअघिका उम्मेदवार शिवबहादुर कुँवरका बारेमा काठमाडौंंस्थित सहकारी संस्था, स्थानीय विद्यालय र बैंकमा अनियमितता गरेको सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि उनको उम्मेदवारी फिर्ता लिइएको हो । सिद्धार्थ सहकारी, जनकल्याण मावि र बैंक कारोबारबारे केही साताअघि एउटा अनलाइनमा समाचार उनका बारेमा समाचार आएको थियो । यो समाचारले उनलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै असर नपर्ने भए पनि विपक्षीले भविष्यमा अडचन गर्नसक्ने भएकाले उनको उम्मेदवारी फिर्ता गरिएको हो । विपक्षी पार्टीहरूले एमालेका विरुद्ध अनेक खालका प्रचार गरिरहेका छन्, तर यसले अछाममा कुनै फरक पर्दैन । उनीबारे आएका समाचारहरू निराधार हुन् । अहिले निर्वाचनको समयमा कानुनी उपचार गर्ने समय नभएकाले उम्मेदवारी फिर्ता लिइएको हो । हामी पछि कानूनी उपचार खोज्ने छौं । साँफेबगरमा एमालेलाई कसैले हराउन सक्दैन ।
†साँफेबगर नगरपालिकाको विकास लागि तपाईका चुनावी एजेन्डाहरू केके छन् ?
– ‘सभ्य, समृद्ध र सफा नगर हाम्रो परिकल्पना, पुरा हुनेछन् जनताका र युवाका चाहना’ भन्ने नारासहित जनतामा गइरहेका छौं । साँफेबगर नगरपालिकाको समग्र विकाससंगै यहाँको समस्या समाधानको लागि मैले प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएको छु । सुन्दर तथा विकासको मुलप्रवाहमा भिजन हामीसंग मात्रै छ । साँफे नगरपालिकाका सवै वडामा सडक सञ्जालले छोएको छ, तर सडकहरू स्तरोन्नती हुनसकेको छैन । म प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि सवै टोलमा सडकको पहुँचदेखि सडकहरूमा ग्राभेल हुँदै कालोपत्रे गर्ने योजना
बनाएका छौ । साँफेबगरसंगै भएर बग्ने बुढीगंगा नदीमा विद्युतक उत्पादनसँगै अछामलाई नै झिलिमिलि बनाउने योजना छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सेती लोकमार्गलाई चाडोभन्दा चाडो सम्पन्न गर्नेका लागि प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म दबावको दिनेछु । त्यस्तै, विद्यालय निर्माण गर्दा टिनको संरचना हुँदै आएकोमा पक्कि भवन बनाउन पहल गरिनेछ । विद्यालयको अनुपातमा विद्यार्थी नहुने, विद्यालयको तलब खुवाउन नक्कली उपभोक्ता समिति बनाउने कार्य हुने गरेको छ । यो समस्यासंगै शिक्षकहरूबीच देखिएको विभेद अन्त्यका लागि पहल गर्नेछु । कृषि, पशु व्यावसायको आधुनिकिरणमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ । युवाहरूका लागि जिल्लामा रोजगारीका सम्भावनाको खोजि गर्ने मेरो योजना छ । महिला, युवा, दलित, आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका पक्षमा काम गर्नेछु । खप्तड, वैद्यनाथ र रामारोशन क्षेत्रलाई पर्यटनसंग जोड्न पहल गर्नेछु । ती क्षेत्रसम्म जाने बाटोको स्तरोन्नती गर्दै पर्यटकको आवागमन गराउनेछु । खप्तडमा केवुलकारको सञ्चालनसंगै होमस्टे सञ्चालनको लागि पहल गर्ने योजना छ । अछाममा सुविधासम्पन्न होटलहरू खोल्नको लागि पहल गर्नेछु । यस्तै बन्द अवस्थामा रहेको साँफेबगर एयरपोर्ट सुचारु गरिनेछ । अहिले १२ करोड रुपैयाँको लागतमा साँफेबगर एयरपोर्ट पिच हुने क्रममा छ । अछाममा चाडै हवाई उडान सुचारु गर्नेछु । वयलपाटा अस्पतालको स्तरोन्नती गर्दै मेडिकल कलेज निर्माणको लागि पहल गर्नेछु । त्यस्तै, खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि पनि पहल गर्ने योजना छ ।
†साँफेबगरलाई मेगासिटीका रूपमा विकास गर्न के पहल गर्नुहुन्छ ?
– देशका १० शहरमध्ये साँफेबगरलाई पनि नयाँ शहरका रूपमा समावेश गरिएको छ । अहिले हामीले बनाएको गुरुयोजनामा मेगासिटीमा हुने आधारभूत भौतिक पूर्वाधारदेखि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायतका विषयवस्तुलाई समेटेका छौं । अहिले साँफेबगरमा ढल निकासदेखि खानेपानीको व्यवस्था, नयाँ बसपार्क निर्माणको लागि पहल भइरहेको छ ।
†सेवाग्राहीहरूको सेवासुविधाका लागि के योजना बनाउनु भएको छ ?
– प्रत्येक वडामा नियमित अनुगमन समिति बनाइने छ । अनुगमन समितिहरूले पनि बदमासी गरिएको पाइएमा जनताले सिधैं प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई सम्पर्क गर्नको लागि हटलाइनको व्यवस्था गरिनेछ । प्रमुख तथा उमप्रमुखलाई वडा अध्यक्षले सञ्चालन गर्ने कामका बारेमा उल्लेख गरेर जनतालाई जानकारी दिनेछु ।
†चुनाव जित्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
– एमाले राष्ट्रियताको अडान र एमालेले अछाममा गरेका विकासका कामहरू जनताले बिर्सेका छैनन् । २०७० सालको निर्वाचनमा दुवै क्षेत्रमा एमालले जितेको हो । पहिलो चरणमा एमालेप्रतिको जनलहरले एमाले चुनाव हार्दैन । यहाँका जनता मलाई जिताउन चुनावको मिति कुरेर बसेका छन् । एमालेको विकासवादी सोच जनताले वुझेका कारण म चुनाव हार्छु भन्नेमा कुनै शंका छैन । एमालेसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने दल साँफेबगरमा छैनन् ।
†अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
– हामी जे बोल्छौं त्यही गर्छौ । हामीलाई सम्पूर्ण जनताले मतदान गर्नेछन् भन्ने विश्वास लिएका छौं । हामी जितेपछि यहाँ समानुपातिक ढंगले विकासलाई अघि बढाउनेछौं । यस क्षेत्रको समृद्धिको योजना नेकपा एमालेसंगै मात्रै रहेकाले भोट हालेर जिताउन आग्रह गर्छौ । तपाईको भोट हाम्रो लागि अमूल्य सम्पत्ती भएकाले खेर जान दिँदैनौ ।